အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်စားသောက်ဆိုင်အပတ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်စားသောက်ဆိုင်အပတ်
သငျသညျအမ်စတာဒမ်မှခရီးစဉ်စီစဉ်ပေမယ့်နေဆဲသွားကြဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျထွက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးပြီဆိုပါက, သင် ... နိုင်ပါသည် စဉ်းစားရန်လိုခငျြ စားသောက်ဆိုင်အပတ်စဉ်လာရောက်လည်ပတ် 2019 နယ်သာလန်နိုင်ငံ.
စားသောက်ဆိုင်အပတ်အတွက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နှစ်စဉ်ရာအရပ်ကိုကြာတဲ့အချက်အပြုတ်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည် 35 အမ်စတာဒမ်တူသောအဓိကမြို့ကြီးများ, နယူးယောက်, နှင့်ဟောင်ကောင်. ပထမဦးဆုံးစားသောက်ဆိုင်အပတ် New York မှာအရပျကို ယူ. ,; တိ Zagat အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး, Zagat စစ်တမ်းကိုတည်ထောင်သူ, နှင့်ဂျိုး Baum, လေးစားဖွယ်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်.
တစ်ပတ်ကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့အခြားမြို့များမှဖြတ်ပြီးပျံ့နှံ့ဒါအောင်မြင်သောခဲ့သည်. စားသောက်ဆိုင်အပတ်၏ရက်စွဲများမြို့မှတမြို့သို့ကွဲပြား; သို့သော်, အယူအဆပုံမှန်အားဖြင့်အားလုံးတည်နေရာကိုဖြတ်ပြီးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်. ပါဝင်ကစားသောက်ဆိုင်တွေမှာဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်းများမှာနေ့လယ်စာနဲ့ညစာအထူးပူဇော်သက္ကာဘို့တစ်ပါတ်မြှင့်တင်ရန်.
အကယ်. သင်က အစားအစာကိုချစ် နှင့်သင့် ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်, စားသောက်ဆိုင်အပတ်သင်တစ်ဦးလျှော့စျေးနှုန်းမှာအမ်စတာဒမ်မှာထိပ်တန်းစားသောက်ဆိုင်မှာစားသောက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း. အဆိုပါလက်ရာမြောက်သောသည် Le ဂိုဒေါင်မှာစားရန်အခွင့်အလမ်းကိုဖမ်း, Okura ဟိုတယ်တွင် Brasserie, La Camelia, ဒီထက်များအတွက် Amstel Hotel ၌ဒါမှမဟုတ် Brasserie!
အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားစားသောက်ဆိုင်အပတ် တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်အမ်စတာဒမ်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်, နွေဦးရာသီမှာ နောက်တဖန်ဆောင်းဦးရာသီအတွက်. နှစ်ကြိမ်တစ်နှစ်, စားသောက်ဆိုင်အားလုံးကျော်အနယ်ရှိသည် တစ်ပတ်ကြာပြဲႏွ ခံစားနိုငျဘယ်အပြည့်အဝသင်တန်းအတွက်အစားအစာ၏အစိတ်အပိုင်းအရာကိုသူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်. သာ€ 28,50 များအတွက် 3-သင်တန်းညစာခံစားကြည့်ပါ!
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 135 အားလုံးအမ်စတာဒမ်ကျော်စားသောက်ဆိုင်သင်၏ရွေးချယ်မှုပေါများသောပါဝင်ဆောင်ရွက်. အဆိုပါ biannual အဖြစ်အပျက်အတွေ့အကြုံရိုးရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ထား. စားသောက် တစ်ဦး fixed စျေးနှုန်းအဘို့မိမိတို့ menus တွေနမူနာကောကျခွငျးအားဖွငျ့အမ်စတာဒမ်အကောင်းဆုံးသောထမင်းစားခန်းထူထောင်မှုမှာ. သင်မဟုတ်ရင်ယခုနှစ်အခြားမည်သည့်အချိန်ကာလအတွင်းအဘို့အပြည့်အဝစျေးနှုန်းပေးချေမယ်လို့စားသောက်ဆိုင်လက်မှတ်ဟင်းလျာများမြည်းစမ်းရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းအချိန်ရှိပါတယ်.
သို့သော်သင်သည်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားရမတိုင်မီ, သင်ရုံကဤစားသောက်ဆိုင်သို့လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ထိုင်ခံရဖို့မမျှော်လင့်နိုင်သည်ကိုမှတ်ချက်ယူ. ကြိုတင်မှာယူမှုများတစ်မဖြစ်မနေများမှာ, ဤအသောအရပ်တို့ကိုအလျင်အမြန်တက်ဖြည့်ပါလေ့သကဲ့သို့သင်ကဲ့သို့အစောပိုင်းသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်စာအုပ်ဆိုင်သင့်တယ်.
အဆိုပါနယ်သာလန်အတွက်စားသောက်ဆိုင်အပတ်မှ Get လုပ်နည်း
အမ်စတာဒမ်စားသောက်ဆိုင်အပတ်ဖြစ်ရပ်ရန်သင့်အားရဖို့ခရီးသွားဘို့များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်နေစဉ်, မီးရထားခရီးသွားလာရန်အရှိဆုံးကြည်နူးဖွယ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ခရီးသွားခြင်း. ဒါဟာစေသည် တစျခုလုံးအတှေ့အကွုံ သင့်ရဲ့အဖြစ်ကိုပိုပြီးအမှတ်ရစရာ ဥရောပတဆင့်သွားလာ, အဆိုပါမြင်ကွင်းများအတွက်တာနှင့်သင့်မှာရောက်ရှိလာ gastronomic ဦးတည်ရာ စတိုင်နဲ့နှစ်သိမ့်အတွက်.
အကောင်းဆုံးကိုအရာတစျခုသငျသညျဥရောပခရီးအခါသင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ သင့်ရဲ့ငွေကြေးဖလှယ်, အားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်.
အမ်စတာဒမ်မှပဲရစ်မြို့ ရထားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်3တစ်နှစ်ခွဲနာရီစဉ် အမ်စတာဒမ်မှဘာလင်6နာရီဖြစ်ပါတယ် ရထားခရီးစဉ်. အစောပိုင်းစာအုပ်ဆိုင်များနှင့် လက်မှတ်စျေးနှုန်းများအပေါ်ကယ်တင်. စားသောက်ဆိုင်အပတ်ရက်စွဲများထုတ်စစ်ဆေး 2019 သင်သည်တတ်နိုင်ဒါနယ်သာလန်နိုင်ငံ သင့်ရဲ့ရထားထိုင်ခုံကြိုတင်ယူထား ကြိုတင်မဲနှင့်ကြီးမားသောငွေစုပျော်မွေ့. အတူမီးရထားခရီးသွားလာအပေါ်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများ Get တစ်ဦးကရထား Save
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Frestaurant-week-netherlands%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#စားသောက်ဆိုင် #restaurantweek ခရီးသွား netရာဝတီ traveltips